Ndi Marketiphrasing bu oke uzo? | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 18, 2012 Wednesday, September 19, 2012 Douglas Karr
Hụ otu m siri mee nke ahụ? M wee Marketing ma jikọta ya Igha okwu. Mara mma, huh? Amaghị m na onye ọ bụla emeela okwu maka usoro ịzụ ahịa iji mepụta okwu… yabụ m mere.
Ndị juri ahụ ka na-apụ apụ ma m chọrọ iji atụmatụ a ma ọ bụ na achọghị m (na mpụga post a). O yiri ka ndị mmadụ nọ ebe niile na-echezi okwu ọhụrụ iji kọwaa tiori ma ọ bụ ngwaahịa ha. Ọ bụghị ihe ọhụrụ. Laa azụ na afọ 50… ihe niile dị ihe-o-matic, na-enye echiche nke akpaaka. Ugbu a ọ dị ka onye ọ bụla na-agbakọ nkeji mkpụrụedemede ọnụ, ma ọ bụ mkpụrụokwu nkebi ahịrịokwu ahịa ọhụụ.
Agaghị m egosi ihe ọbụla dịka ụfọdụ n’ime ha ma ihe. Ekwenyere m na nke ahụ bụ isi okwu… ha ga-abụ ndị maara ihe (atụla ọnụego ahịa). Mgbe m jụrụ ajụjụ ụfọdụ na-elekọta mmadụ media isi, ha zara na ha bụ ndị ikpe… ha mgbe gbalịrị ime ka elu ahịa nkebi ahịrịokwu aka na ha azum.
Jeff Widman kwuru na ọ bụ ikpe mara maka ịme ha. Na Jason Keath kwuru, Onye isi oche nke Social Fresh, wetara ụfọdụ nnukwu isi iji kwado atụmatụ ahụ. Jason nyere 3 uru iji mepụta ihe pụrụ iche na cleaver ahịaiphrase. Ọ maghị na m mebere okwu ahụ mgbe m kwuru banyere ya… na nkọwa dị n'akụkụ nke ọ bụla n'ime ha bụ nke m:
Echiche Echiche - ọ na-enye echiche na ị na-enye isiokwu miri emi ma na-agbada n'okporo ụzọ na-agabeghị njem.
Ọkwa - Ọ bụrụ na echiche ahụ gbasaa, ọ bụ okwu metụtara aha gị, ụlọ ọrụ gị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta - ọ bụrụ na ị na-echepụta okwu ahụ, a ga-ekekọta gị na okwu ahụ na ntanetị. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọ gbasaa, ndị mmadụ ga-achọta gị karịa onye ọ bụla na-asọmpi.
Melite: Brian Carter wee jiri ụfọdụ ahịa kasịnụ ka mma maka ahịaiphrase… neomarketinglogismMa ọ bụ nke a na-akọkarị neogurulogism.
Kedu ihe kachasị amasị gị na ọkacha mmasị gị ahịaiphrases?
Jason Keath kwuru
Sep 18, 2012 na 12:02 PM
Tweetup nke Scott Monty
Sep 18, 2012 na 12:03 PM
Inbound Marketing site na HubSpot
Sep 18, 2012 na 12:12 PM
Obere amamihe ma ọ bara uru karị. Enwerem ndi enyi na Kpo okwua n’onu mana ahuru m ya n’anya. Ọ bụ n'ihi na ọ na-ahazi nke ọma na inbound na outbound sales.
Sep 18, 2012 na 1:27 PM
Inbound bụ akara nzuzo nke ahịa ikike bụ akara nzuzo nke ire ahịa. Nke ahụ kwuru, ọ bụ ụzọ m kachasị amasị m iji kọwaa akụkụ ahụ. Ugbu a, ọ dị onye mkpa ịkwa ụda ma na-abụ abụ "ahịa na-apụ apụ" n'olu dara ụda ka ụwa dum nke ịre ahịa wouldntanetị ga-adị mfe ịkọwara ndị ahịa. Na-eche mgbe niile Hubspot ga-eme ya.
Sep 18, 2012 na 2:57 PM
Ma otutu ulo oru puru iche na "ahia ahia" ndi nile na-erite uru HubSpot.
Sep 18, 2012 na 4:05 PM
Ndi mmadu ga-aga inyocha ha ma ghota na ha nwere ike inweta ihe ha choro site na Google Analytics n’enweghi ugwo $ 250 n’onwa maka ngwanro a:
Sep 18, 2012 na 4:09 PM
Hubspot mara ezigbo mma, agbanyeghị! Nanị nchịkọta ndị ahụ na-akwụ ụgwọ n'ezie.
Sep 18, 2012 na 4:17 PM
kwetara. Enwere m mmasị na atụmatụ ahịa na usoro ha mana, enweghị m obi. M ga-ele ya anya ọzọ. Ọ dịtụ.
Sep 18, 2012 na 5:08 PM
Hubspot bụ sọftụwia siri ike siri ike. Nchịkọta nchịkọta ha bụ 5-10% nke ihe ha na-enye. CRM, email, ndu ndu, ịde blọgụ, nghọta SEO na ọtụtụ ndị ọzọ. Ha na-agbanwekwa ngwa ngwa karịa ọtụtụ ngwa ngwa ahịa ha na ndị asọmpi CRM.
Sep 18, 2012 na 5:14 PM
Chere? Ndi CRM bu nke ha ka ha bu ndi na akpo ọcha? Olee otu o si aru oru?
Sep 18, 2012 na 5:24 PM
Ha nwere onye njikwa CRM / kọntaktị nke ha nke na-elekwasị anya na ndu kọntaktị kọntaktị na email. Ha na-esonye na isi CRM niile m maara na nke ahụ. Syncing ma ụzọ.
Ozi ndi ozo banyere nhapu ohuru ha: http://www.hubspot.com/blog/bid/33574/Get-to-know-HubSpot-3-A-look-at-some-of-the-standout-features
Sep 18, 2012 na 5:53 PM
ahhh. Ọ dị mma. Nke ahụ dị mma
Sep 18, 2012 na 12:11 PM
Tweetup bụ n'ezie a mmeri… na N'ezie ndị symmetry to meetup bụ ingenius.